खालिङ संघ अमेरिका शाखाद्धारा ‘किरात राई संग्रहालय’ बनाउन साढे चार लाख सहयोग
काठमाडौं, ९ माघ । खोटाङमा निर्माणाधिन किरात राई संग्रहालयका लागि किरात खालिङ राई उत्थान संघ, अमेरिका शाखाले ४ लाख ४९ हजार ९४२ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । अमेरिकामा बसोबास गर्ने ..
आज अचानक किन गए २१ दल निर्वाचन आयोगमा
काठमाडौं, ९ माघ । राष्ट्रियसभा चुनावको विषयमा निर्वाचन आयोगले आज मंगलबार राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्दैछ । छलफलपछि सातवटै प्रदेशमा राष्ट्रियसभा चुनावका मतदाताहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ ।यसैबीच आइतबार राष्ट्रियसभा ..
भैरावश्रम माविको नवनिर्मित भवन समुद्धघाटन
गोरखा, ८ माघ । ०७२ सालको विनाशकारी भुकुम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको गण्डकी गाउँपालिका–३ फुजेलमा रहेको भैरावश्रम विद्यालयको नवनिर्मित भवनको समुद्धघाटन भएको छ । फुलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रष्टको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो ..
आदिवासी जनजातिका पहिचान र प्रतिष्ठामा आँच आउने काम भयोे : महासंघ
काठमाडौ,९ माघ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधान बमोजिम कतिपय ऐन, कानून, नीतिहरू नयाँ बनाउने र कतिपय संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको सन्दर्भमा ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ..
सपथग्रहण नगरेका प्रदेश सांसदले राष्ट्रियसभा चुनावमा मतदान पाउछन् त ?
काठमाडौं, ९ माघ । प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको महिनौ दिन पछि विजयी उम्मेदवारले सपथ ग्रहण गरेका छन् । नजिकदै गरेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाइ मध्यनजर गरे सरकारले विभिन्न मत हुदाहुदै ..
काठमाडौं । चर्चित हाँस्यव्यंग्य कलाकार मनोज गजुरेलले श्रीमती मिनासँगको डिभोर्सबारे सार्वजनिक रुपमा पुष्टि गरेका छन् । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा मनोजका श्रीमतीसँग डिभोर्स भएको जानकारी आएपनि उनले अहिलेसम्म प्रतिक्रिया दिएका ..
काठमाडौं । चर्चित गायिका तथा एमाले नेता कोमल वली राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने भएको छ । एमाले स्थायी कमिटीको आज बसेको बैठकले ५ नम्बर प्रदेशबाट वलीलाई उठाउने निर्णय गरेको ..
काठमाडौं, ८ माघ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ३, हैबुङस्थित हैबुङ महादेवस्थान मावि भवन २०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनासकारी महाभुकम्पले बिनासै बनायो । करिब तीनवर्षसम्म अस्थायी टहरामा ..
काठमाडौं, ८ माघ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, काँग्रेस र संघीय समाजवादी फोरम नेपालसंग तालमेल गरेर जाने भएको छ । राजपाको राजनीतिक समितिसहित बसेको अध्यक्ष मण्डल बैठकले ..
काठमाडौँ, ८ माघ । काठमाडौँ जिल्लाबाट स्थानीय तहका उम्मेदवारको खर्च विवरण क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ । गत वैशाख ३१ गते निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारको आज निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण ..
काठमाडौँ, ८ माघ । आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी मतदाता (निर्वानक मण्डल) प्रदेश नं २ मा र सबैभन्दा कम प्रदेश नं ६ मा रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा ..
गुल्मी, ८ माघ । स्वास्थ्य चौकि सत्यवति गाउपालिका ४ लिम्घामा वर्थिङ सेन्टरको उद्घाटन गरिएको छ । वर्थिङ सेन्टर संचालनमा आएसँगै लिम्घाबासिलाई प्रसुति गराउनको लागि जुहाङ खैरेनी जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको ..